Nnukwu batrị 5000 mAh bụ ihe Realme 5 ga-enwe | Gam akporosis
Na a na-adịbeghị anya na mmepe, Geekbench gosiri anyị ụfọdụ nkọwa nkọwa nke 5 bu eziokwu na akara ndị a na-esote ngwaọrụ ogo na ederede na nchekwa data ya. Dị ka atụ anya ya, arụmọrụ nke ebe a dị ezigbo mma, dabere na akụkụ ebumnuche ya na ọnụahịa ọ ga-enwe.
El Ezigbo 5 Pro Ọ bụ ekwentị ọzọ nke dị na ụfọdụ akụkọ na izu ndị na-adịbeghị anya. Nke a bụ ụdị Ahụla mbụ, nke ntapu nke e ji mara ya, nke a na-emezukwa ya na ndị ọzọ na-ewu ewu -abụghị nke a na-ewu ewu na ekwentị mkpanaaka tupu ha amalite, dị ka ekwesịrị ịdeba na ọ bụ naanị ụbọchị ole na ole site na ya ka ọ bụrụ ọkwa. N'ihi nke a, ọtụtụ nkọwa nke duo a apụtawo, yana ọtụtụ àgwà ndị a ka ekpughere ma gosipụta, dị ka ike batrị. Agbanyeghị, data ọhụrụ a metụtara Realme 5 naanị, ebe ụlọ ọrụ ahụ kwuputala ya naanị maka ụdị a.
Site na akwụkwọ mmado, akwadoro batrị 5,000 mAh maka Realme 5. Anyị anaghị atụ anya na Realme 5 Pro ga-akwadebe ihe pere mpe; n'eziokwu, ị nwere ike ịnwe nke buru ibu karị, mana nke a bụ ihe ka dị n'okpuru. Dị ka data iji banye na akaụntụ, ikike batrị a na-anọchite anya mmụba nke ihe karịrị 700 mAh, ma e jiri ya tụnyere 4,230 mAh nke batrị nke 3 bu eziokwu.
Realme 5 ọkwa batrị
Mana ọ bụghị ihe niile dị mma. Dị ka akụkọ ọjọọ, ngwaọrụ agaghị akwado teknụzụ na-ebu ngwa ngwa VOOC 3.0. Realme 5 Pro ga - egosi nke a, na - eduga anyị ka anyị kwenye na, ee, ọ ga - abịa na batrị 5,000 mAh ma ọ bụ karịa.
Ezigbo ngwa ngwa na-enweghị nsogbu ọ bụla ọbụlagodi mgbe ị na-eji ekwentị gị - gwa gị na ahụhụ na-akwụ ụgwọ gị na VOOC Flash Charge 3.0 on # realme5Pro!
Mbido na 12: 30Pm, August 20.
Mara karịa: https://t.co/IczXkhy4lB #QuadCameraSpeedster pic.twitter.com/j3wlvgNH8u
- realme (@realmemobiles) August 14, 2019
Geekbench gosipụtara n'oge na-adịbeghị anya ọnụ ga-eji Snapdragon 665, Akara achịcha na RAM 4 GB. Agbanyeghị, anyị ga-ekwenye na ozi a n'ụbọchị ebido ya, nke bụ Ọgọstụ 20, ụbọchị nke, rue taa, erughị otu izu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nnukwu batrị 5000 mAh bụ ihe Realme 5 ga-enwe
Redmi na-arụ ọrụ na ekwentị mbụ ya na 5G